Ukuphupha ngokuhamba kwetotshi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuhamba kwetotshi yinto enqabileyo kule mihla. Ngokukodwa ukusukela kwinkumbulo yexesha elifana ne-National Socialism phantsi kuka-Adolf Hitler ivela apha. Kungenxa yokuba emva phayaa, uthotho loloyiso okanye lwezihlandlo zomkhosi zazibhiyozelwa ngomngcelele wetotshi okanye umngcelele onobungangamsha emkhosini.
Owona mngcelele wethotshi waziwayo wexesha lethu ngowona unxulunyaniswa ne "Greater Zapfenstreich" yokugxotha umongameli womanyano, osasazwa nakumabonakude. Kodwa ukukhanya kwetotshi akufumaneki kuphela kwicandelo lezomkhosi. Umzekelo, abacimi-mlilo bakwanombane wokukhanyisa itotshi kwimibhiyozo ethile.
1 Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokuya kuhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, uphawu lwephupha "umngcelele wokukhanya kwetotshi" ikakhulu uzisa elinye lamaphupha. Umvuzo okanye nokuhamba nawe. Uya kuzukiswa el mundo lumkela iinzame zakho kunye nempumelelo. Oku kuyakuzalisekisa umnqweno wakho wokukhathalela ngokufanelekileyo.
Ukubona kokuhamba kwetotshi ephupheni kunokubonwa njenge ukululeka ukutolikwa njengongazibandakanyi nothando lwexesha elifutshane. Nabani na ojonga ukuhamba kwezibane ephupheni lakhe kufuneka aqonde ukuba ebomini bokuvuka umdla weqela ungaphambili kwaye hayi owomntu omnye. Mhlawumbi kuya kufuneka abeke ezakhe izicwangciso kwaye akhusele iqela.
Ukuba iphupha lithatha inxaxheba kwimizila yeetotshi ephupheni, uyakhunjuzwa ngokwentetho yephupha ngokubanzi yomsebenzi okanye umsebenzi, olibeleyo. Inokuba ngumdla ukubona apho umgaqo wokukhanya kwetotshi usinga khona kwaye zeziphi iinkcukacha ozibonayo xa ulele. Ngenxa yokuba ezi nkcukacha zinokunika imikhondo engakumbi malunga nokulityalwa Imbopheleleko ndihlangule.
Ukuthatha inxaxheba kumngcelele wokukhanya kwetotshi kunokuqondwa njengesibhengezo samaxesha olonwabo kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yephupha kutolika umfanekiso wephupha "umngcelele weetotshi" njengophawu lwephupha. ukuqonda. Kungenxa yokuba ufuna ukuba impumelelo yakho ebomini kunye nempumelelo zaziwe ngokufanelekileyo.
Ngaphaya koko, ukujonga ukukhanya kwethotshi ephupheni kunokubonisa ulwazi oluthile okanye umbono olindelweyo ngumntu oleleyo kwihlabathi elivukayo. Ukuba unikwe itotshi ephupheni lakho, kungekudala uza kufumana ulwazi olufunayo.
Ukuba uthatha inxaxheba kumngcelele wokukhanya kwetotshi ephupheni lakho, ungathanda ukuba yinxalenye yendawo ethile kwilizwe lokwenyani. iqela yiba. Kungenxa yokuba oku kubonisa izimvo kunye nezimvo ezifanayo nomphuphi.
Ukuthwala itotshi ngexesha lokuhamba ephupheni ufuna ukutsalela ingqalelo kwezengqondo kwinto yokuba lo mntu kuthethwa ngaye uyathandwa ngumntu okwenyani. Nangona kunjalo, akakayifumani le nto.
Uphawu lwephupha «umngcelele wethotshi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwenkqubo yokukhanya kwetotshi inokuqondwa njengokubhekisa kubantu abathanda izinto ezifanayo ngabo baphuphayo kwihlabathi elivukayo. Isikhokelo somoya nokubonelela ngesikhokelo.